Daawo: Dufaan ku dhufatay Wadanka Haiti oo ay ku dhinteen In kabadan 900 Ruux ayaa Hada u gudubtay Wadanka….. | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Dufaan ku dhufatay Wadanka Haiti oo ay ku dhinteen In kabadan 900 Ruux ayaa Hada u gudubtay Wadanka…..
Saturday October 8, 2016 - 9:34 under Somali News by Tifaftiraha K24
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in ay qaadan karto maalma kale oo dheerad ah si loo kala ogaado qasaaraha iyo samenyta dhabta ah ee ka dhalatay dufanadii ku dhuftay dalka Haiti.
Masuuliyinta halkasi jooga waxaa ay sheegen in 800 oo qof la rumesanyahay in ay ku dhinteen dabeylaha ku dhuftay Haiti Malintii Talaadada.
Carlos Veloso, oo katirsan Hey`adda cunnada addunka ee WFP ayaa sheegay in gargaar ah la garsiiyay halka ay mashaqadu ka dhacday.
Balse deegaanada ay yihiin kuwa go`doonsan, sida kaliya ee lagu gaari karana ay tahay in la adeegsado diyaaradaha qumatiga ukaca ee Helicoptarada.
Waxaana uu sidookale uu sheegay in dadka rayidka ee Haiti ay sameeyeen waxwalbo oo karankooda ah, laakiin ay u baahanyihiin tageero dheeraad.
Dhinaca kale Duufaaantan ayaa billowday subaxnimada jimcaha inay ku dhufato xeebaha bari ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka.
Duufaanta Matthew ayaa horey boqolaal qof ugu soo dishay waddamada Caribbean-ka, oo ay ku jiraan 300 oo ay ku dishay dalka Haiti.
Duufaaantan ayaa waxaa hadda hoos loogu dhigay darajada saddexaad, waxayna wadataa dabeylo ku socda 100 KM saacadiiba oo ku dhacaya guryaha.
Illaa laba milyan oo qof oo ku nool xeebaha Florida ayaa la amray inay guryahooda ka tagaan una baxaan meelo ammaan ah.
In ka badan 240,000 ayaa koronto la’aan, ayada oo la filayo in dadkaas ay sii kordhaan marka duufaanta ay u dhaqaaqdo dhinaca woqooyi ee gobolka.
Dadka saadaaliya cimilada ayaa sheegaya in duufaanta ay marka ay u dhaqaaqdo dhinaca woqooyi ku dhufan doonta xeebaha bari ee gobollada Georgia iyo South Carolina, ka hor inta aysan dhinaca badda u dhaqaaqin ama kusoo laaban Florida mar labaad.
Halkaan Hoose ka Daawo Sawirro:
Storm surge and rainwater begin to inundate King Steet at the southern-most tip of the city as Hurricane Matthew arrives in Charleston, South Carolina late October 7, 2016. REUTERS/Jonathan Drake
A man grabs papers from the floor after Hurricane Matthew passes Jeremie, Haiti, October 7, 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins